Daawo: QARAX ka dhacay goob uu ka hadlayey ra'iisul wasaare ABIY AHMED - Caasimada Online
Home Dunida Daawo: QARAX ka dhacay goob uu ka hadlayey ra’iisul wasaare ABIY AHMED
Daawo: QARAX ka dhacay goob uu ka hadlayey ra’iisul wasaare ABIY AHMED
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Qarax ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay meel u dhow goob uu ku sugnaa Ra’isul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, halkaas oo uu kula hadlayay dadweyne aad u farobadan oo isugu soo baxay si ay u taageeraan qorshayaashii isbadalka.
Warbaahinta Itoobiya iyo Ra’isul wasaaraha laftiisa ayaa xaqiijiyay qaraxa, waxaana la xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca dad kala duwan. Dadka inta badan waxa ay ku dhaawacmeen isbuurasho dadka ay sameeyeen.
Ra’isul wasaare Abiy Axmed ayaa markiiba meesha lagala cararay, wuxuuna markii dambe hadal ka jeediyay xafiiskiisa, hadalkaas oo toos looga baahiyay taleefishinka qaranka Itoobiya.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen qaraxa kuwa kalena ay ku dhinteen.
Faahfaahin lagama bixin cidda ka dambeysay qaraxa, balse walwalka laga qabo amniga horey ayay usii muuqatay, waxaana la arkayay Ra’isulwasaare Abiy oo ka hadlayay meel lagu xeendaabay difaac qaruurad ka samaysan.